အဖြူရောင်လမ်းကလေး: August 2012
" လွတ်မြောက်ခြင်း......ငှက် " ( သို့မဟုတ် ) "ဘယ်သူပြောလဲ....သူသေတယ် "
ကျွန်တော်အိပ်ဖို့ ကြိုးစားမိပါတယ်။ မရဘူး။ ကျွန်တော့်နားထဲမှာ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ကြားနေရတယ်။ ထပ်ခါ ထပ်ခါ.....။ တစ်ခါတစ်ခါ နောက်တစ်ပုဒ်ကို ကူးသွားပြန်ရော။ ဒါပေမဲ့ အဆိုတော်က တစ်ယောက်တည်း။ နောက်ဆုံး မျက်စိကို စုံမိတ်ပြီး ကျွန်တော့်စိတ်ကို လျှော့ချလိုက်တယ်။
" ကျွီ "
ဒါ ဘာလဲ။ ကျွန်တော်ပိတ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်အခန်းတံခါးကို တစ်ယောက်ယောက်က အသာလေး တွန်းဖွင့်လိုက်တဲ့ အသံပါလား။ ကျွန်တော် မျက်လုံးမဖွင့်ဘူး။ နားစွင့်နေတယ်။ ခုန သီချင်းသံတွေ ဘယ်ရောက်သွားလဲ။
" ညီလေး။ ထလေကွာ။ စကားပြောရအောင် "
ဟာ-လူတစ်ယောက် ကျွန်တော့် အနားရောက်နေပါလား။ ကျွန်တော် မျက်လုံးကိုဖွင့်ပြီး မီးခလုတ်ပါ တန်းဖွင့်လိုက်တယ်။ ထူးဆန်းတာက ကျွန်တော့်မှာ ကြောက်စိတ်ရှိမနေဘူး။ ဒီအသံက ကျွန်တော်နဲ့ ရင်းနှီးနေလို့များလား။ အခန်းထဲက မီးချောင်းအလင်းရောင်အောက်မှာ ကျွန်တော့်ကို နှိုးတဲ့လူကို ကျွန်တော် သေသေချာချာ ကြည့်လိုက်တယ်။
" ဟာ-အစ်ကို "
ကြည့်စမ်းပါဦး။ ဘယ်သူလဲမှတ်တယ်။ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး အဆိုတော်။ ကိုငှက်လို့ လူတွေခေါ်ကြတဲ့ ဂီတပညာရှင်လေ။ သူ.........။ ထူးအိမ်သင်.......။
" အစ်ကို ကျွန်တော့်ဆီလာတယ်။ ၀မ်းသာလိုက်တာ အစ်ကိုရာ။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေကို လှမ်းပြောလိုက်ဦးမယ် "
" ညီလေး-အစ်ကို အချိန်သိပ်မရဘူး။ ညီလေးနဲ့ စကားပြောချင်လို့။ ဒါမှမဟုတ်ရင် အစ်ကို ဂစ်တာခဏတီးမယ် ကွာ "
" ဟာ-အဲဒါဆို ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတွေကို မပြောတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ ဂစ်တာရှိတယ်အစ်ကို။ ဒီမှာ တီးပါ "
ခပ်အေးအေး အပြုံးတစ်ခုကို ကျွန်တော်လှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။ ဆံနွယ်ကောက်ကောက်လေးတွေက နားထင်ကနေ ဦးခေါင်းနောက်ဆီကို တိုးဝင်သွားတာ၊ ပါဝါမျက်မှန် ထူထူရဲ့ အောက်က တောက်ပတဲ့ မျက်ဝန်းတွေ၊ သွယ်ဆင်းလာတဲ့ ပါးရိုးက တစ်ဆင့် ချွန်ထက်သွားတဲ့ မေးရိုး၊ သွယ်လျတဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေရဲ့ ဂစ်တာပေါ်က လှုပ်ခတ်ကစားမှု။ ကျွန်တော်မျက်လွှာ မချဘဲ ကြည့်နေမိတယ်။
သံစဉ်တစ်စက စပြီးပြေးလွှား ထွက်ပေါ်လာတယ်။ သူ့ကိုကြည့်ရတာ မမောပန်းဘဲ စိတ်တွေက လန်းဆန်းနေပုံပါ။ မျက်ဝန်းတွေက ပိုပြီး တောက်ပနေတယ်။ ကျွန်တော်သိတယ်။ အဲဒီသီချင်းကို....။
"နာရီသံတွေဆူညံလွန်းနေ....ရင်ခုန်သံတွေ မြန်တယ်အချစ်ရေ......လိုချင်ပါတယ် မျှော်လင့်ခြင်းတွေ....တို့တွေ ဒီအချိန်ဟာ နောက်ဆုံးလား........"
ကျွန်တော်က သီချင်းအစကို ကိုငှက်ရဲ့ အင်ထရိုနောက်မှာ ကပ်လိုက်ပြီး ဆိုလိုက်တယ်။ ကိုငှက်က နာရီသံတွေ ဆူညံလွန်းနေ တဲ့။ ကြည့်စမ်းပါဦး။ ဒီညမှာပဲ ကျွန်တော်အဲဒီ သီချင်းကို သတိရနေခဲ့သေးတာ။ ကိုငှက် စလိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ ကျွန်တော်က ရင်ခုန်သံတွေ မြန်တယ်အချစ်ရေ ကို ဆက်ပြီး စီးမျောလိုက်ပါရင်း ဆိုဖြစ်နေတော့တာ။ ကောင်းလိုက်တဲ့ လက်ခတ်၊ ကောင်းလိုက်တဲ့ သီချင်း။ ကျွန်တော့် ရင်ခုန်ခြင်းတွေက ၁၉၈၇-၈၈ ခုနှစ်များဆီကို ပြန်ရောက်သွားလေရဲ့။
"ယုံကြည်တာတွေ အားလုံး စွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်......တို့အဖြစ်က ဆုံနိုင်ဖို့ သိပ်မလွယ်....."
ကိုငှက်ရဲ့ ပထမဆုံး သီချင်းလေ။ ပထမဆုံး အခွေထဲက ပထမဆုံး အပုဒ်။ တစ်ခွေလုံး သံစဉ်တွေ မထပ်ခဲ့တဲ့အပြင် သံစဉ်တွေကလည်း ထူးဆန်းလိုက်တာ။ အသစ်တွေ။ ပြီးတော့ ကောင်းလွန်းလှချည်ရဲ့။ ဒါမျိုး အရင်က နားထဲမှာ မကြားခဲ့မိဘူး။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲက ဖြစ်တည်မှု။ ကိုငှက် သူ့အတိတ်ကို သတိရ တမ်းတနေပုံပါပဲ။
ကျွန်တော်က ကိုငှက်ရဲ့ တီးလုံးသံတွေနောက်မှာ သီချင်းတွေကို လိုက်ဆိုဖြစ်နေတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ ကိုငှက်က မောလို့ ရပ်နေပေမယ့် ကျွန်တော်မရပ်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ ကိုငှက်သီချင်း စာအုပ်တွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ကြည့်ဆိုလို့ရတယ်။ အားလုံးနီးပါး အလွတ်ရနေခဲ့တော့ စာအုပ်လည်း သိပ်မလှန်ဖြစ်ပါဘူး။
" အစ်ကို၊ အဲဒီအခွေ စထွက်တော့ ကျွန်တော်တို့နားမှာ တော်တော်စွဲတယ် အစ်ကို "
" ဟုတ်လား။ အဲဒီအခွေထဲက ညီလေး အကြိုက်ဆုံးသီချင်းကို ပြောပြပါလား "
"အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် အစ်ကို့သီချင်းတွေကို တော်တော်များများ ကြိုက်တယ်အစ်ကို။ အကြိုက်ဆုံး ဆိုရင်တော့ Title သီချင်းပဲ။ နာရီပေါ်က မျက်ရည်စက်များ ဆိုတဲ့ သီချင်းပဲ "
ကိုငှက်က တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေး ပြုံးပါတယ်။ ကိုငှက်က နောက်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို တီးလုံး စ၀င်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကလည်း ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းပါ။ ' ဝေးသွားတဲ့အခါ ' ဆိုတဲ့ သီချင်းပါ။
"အစ်ကိုက Jazz ကို တော်တော်နိုင်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် အဲဒါကို တော်တော်သဘောကျ မိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ Jazz ဂီတကို သီချင်းဖွဲ့နိုင်တဲ့သူ လက်ချိုးရေလို့ ရတယ်အစ်ကို။ လက်ချောင်း ဆယ်ချောင်းမပြည့်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်သိတယ် "
ကိုငှက်က တစ်ခုခုကို စဉ်းစားနေရင်းနဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ကူးသွားပါပြီ။ ပြီးတော့ သူ့နှုတ်က ဖွဖွညင်ညင် ရွတ်သံကို ကြားရတယ်။
" ကွယ်လွန်ပြီးသော အိပ်မက်များ......"
ကျွန်တော် ကြက်သည်းထလာတယ်။ ဒါ ကိုငှက်ရယ်၊ ကိုညီညီသွင်ရယ်၊ ကလိုမှူးရယ် အိုအေစစ်စတူဒီယိုမှာ သီချင်း တစ်ယောက်တစ်ပုဒ်စီ ရေးခဲ့ကြတုန်းက ကိုငှက်က သံစဉ်အရင်ရပြီး စာသားတစ်ကြောင်းပဲ ရတယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းလေ။ အဲဒီစာသားက အခုကိုငှက် ဆိုလိုက်တဲ့ ကွယ်လွန်ပြီးသော အိပ်မက်များ ဆိုတဲ့ စာသား။ တစ်လလောက်နေမှ သီချင်းတစ်ပုဒ်လုံး ပြီးသွားခဲ့တာလို့ သိရတယ်။
ကျွန်တော် ဒီသီချင်းကို လိုက်မဆိုဖြစ်ဘူး။ စိတ်ထဲက လိုက်ပြီး ညည်းနေတယ်။ ပြီးတော့ အတွေးတွေက ကိုငှက် သီချင်းမှာ ဖြန့်ကျက်ထားတယ်။
" ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ နှလုံးသား.........ရှင်သန်စေသူ တန်ခိုးရှင်.......အခမ်းနားဆုံးသော သက်ရှိကဗျာ.....ဧရာဝတီ...."
အားကောင်းလိုက်တဲ့ စာသားတွေ။ ကိုငှက်ချစ်တဲ့ ဧရာဝတီက ကျွန်တော့်နှလုံးသားမှာ ဖြတ်စီးနေလေရဲ့။
"ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် စစ်မက်များ..........ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြရာ.......ဂန္ထ၀င်မြောက်တဲ့ အချစ်နဲ့......ကာကွယ်သူ တို့ရဲ့ ဓားတွေ......."
ကျွန်တော်လည်း ကိုငှက်နဲ့အတူ ဧရာဝတီကို ချစ်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်နေလေရဲ့။ ဒီဧရာဝတီမှာ စစ်မက်တွေ ဖြစ်ခဲ့ဖူးလေရဲ့။ ဒီဧရာဝတီမှာ သူရဲကောင်းတွေ မွေးခဲ့ဖူးလေရဲ့။ ဒီဧရာဝတီမှာ..........။ ကျွန်တော် ရင်နင့်စွာနဲ့ ရာဇ၀င်များရဲ့ သတို့သမီး.......ငါတို့ရဲ့ ၀ိဥာဉ်........လို့ ကိုငှက်နဲ့ ဆက်ခါ ဆက်ခါ လိုက်ဆိုနေမိတော့တယ်။
" အစ်ကို မောရင်ခဏ နားပါလား "
ကျွန်တော်က သီချင်းအဆုံးမှာ ကိုငှက်ကို ပြောကြည့်တယ်။ ခေါင်းခါပြတယ်။ အနုပညာမှာ ဈာန်ဝင်နေရင် ဘယ်ဟာမှ ရပ်လို့မရ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဖန်တီးတဲ့ အနုပညာတွေဟာ အားကောင်းတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ခံစားတဲ့ အနုပညာဟာ ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် ညရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းအောက်မှာ အနုပညာကို ခံစားနေတယ်။ ကျွန်တော် မတားဘူး။ ကိုငှက် လွတ်လပ်စွာ ခံစားနိုင်အောင် ကျွန်တော်ငြိမ်နေလိုက်တယ်။
"ကိုယ့်ရဲ့ အခန်းငယ်လေးထဲမှာ နေ့တိုင်း......အားငယ်ထိတ်လန့်စွာ ပုန်းအောင်းနေ တစ်ယောက်တည်း..."
သက်ငြိမ်။ ကိုငှက် အသံထည့်ခဲ့တဲ့ လှပတဲ့ ပန်းချီကား။ ကျွန်တော့်အခန်းကို ကိုငှက်မြင်ပြီး ဒီသီချင်းဆိုဖို့ အာရုံရသွားဟန် တူတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မှာ ဆေးလိပ်တိုတော့ မရှိဘူး။ စာရွက်အပိုင်းအစတွေ ရှိနေတယ်။ ကျွန်တော် ကဗျာရေးတယ်။ ရန်ကုန်မှာနေတုန်းက ခံစားလို့ရရင် သီချင်းရေးတယ်။ ကိုငှက်ရဲ့ သက်ငြိမ် အဆုံးမှာ ကျွန်တော့်ကို သူကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောတယ်။
" ညီလေး အခန်းကလည်း အစ်ကို့လိုပဲ။ အစ်ကို အဲဒါကြောင့် သက်ငြိမ်ကို ဆိုဖြစ်တာ"
" ကျွန်တော်တို့က အနုပညာ ဖန်တီးရတာချင်း တူလို့ ဖြစ်မှာပေါ့ အစ်ကို။ ကျွန်တော်က တိတ်ဆိတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကဗျာတွေ၊ သီချင်းတွေ ဖန်တီးရတာ ပိုကြိုက်တယ်လေ။ အဲဒါကြောင့်ပါ "
" အစ်ကို နားလည်တယ်ကွ။ ညီလေးလည်း သီချင်းရေးလား "
" ဟား......ဟား......။ အစ်ကိုရာ။ အထင်မကြီးပါနဲ့။ ကျွန်တော်က ဂစ်တာဆို Chord Theory လောက်သာ သိတာ။ အစ်ကို့လို ပဲပင်ပေါက် Notes တွေဖတ်တတ်တဲ့ အဆင့်မဟုတ်ဘူး။ ဂီတကို ဖန်တီးသူမဟုတ်ပါဘူး အစ်ကို။ သူငယ်ချင်းတွေက ကော်ပီလေးတွေ နမူနာပေးရင် ရေးကြည့်တယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ အာရုံရရင် Own Tune လို့ပြောတဲ့ သံစဉ်လေးဘာလေး ရှာပြီး ရေးရတာမျိုး ရေးကြည့်တယ်။ သူများတွေ ပြောသလိုပေါ့။ Round Chord တွေက ခပ်များများရယ်။ အစ်ကိုနဲ့ ကိုညီညီသွင်တို့လို Jazz တွေ ရေးတတ်တဲ့ သီချင်းရေးဆရာ အဆင့် မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ။ လက်ကွက်တွေတောင် Chord ကြီးတွေတောင် မကိုင်နိုင်လို့ ဒီအတိုင်း ဂစ်တာတီးတတ်ရင် တော်ပြီဆိုတဲ့ အဆင့်လောက်နဲ့ ရပ်နေတဲ့ကောင်ပါ "
" အဲဒီလိုလည်း မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ ကြိုးစားပါ။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ ဒါနဲ့ စားပွဲပေါ်က စာရွက်တွေက..."
ကိုငှက်က ကျွန်တော့် စားပွဲပေါ်က စာရွက်တွေ မြင်ပြီး မေးပါတယ်။
" အဲဒါကတော့ ကဗျာစာရွက်တွေ အစ်ကို "
" ဪ-ညီလေးလည်း အနုပညာသမားပဲကိုး "
ကိုငှက်က ကျွန်တော့်စာရွက်တွေကို ကြည့်ပြီး အဲဒီလို ပြောတော့ ကျွန်တော်နည်းနည်း အနေရခက်သွားတယ်။ ကျွန်တော်က ဆရာကြီးမှ မဟုတ်တာ။ ကျွန်တော်က ကိုယ်ခံစားရတာတွေကို ချရေးသူ တစ်ယောက် မျှသာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကျွန်တော့်ဘာသာ သိနေတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ လူတွေကိုတော့ ချပြဖြစ်နေတယ်။
" ညီလေး ရင်ထဲမှာ ခံစားမှု တစ်ခုဟာ ကဗျာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ သီချင်းလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဟုတ်လား "
" ဟုတ်တယ် အစ်ကို။ စာတစ်ပုဒ်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အားလုံး ဖြစ်နိုင်တယ် "
" အစ်ကိုတို့က အနုပညာကို ခံစားရသလို ဖန်တီးပစ်တာကွ။ ဝေဒနာပေါ်လာတိုင်း အနုပညာတွေ ဖြစ် ကုန်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ညီလေးလည်း အနုပညာသမားပဲပေါ့ "
ကျွန်တော်ကြည်နူးမိသလို ခံစားရတယ်။ ကိုငှက်နဲ့ အနုပညာ မြစ်ထဲစီးပြီး ကူးခတ်ပစ်လိုက်ချင်တယ်။ ရှင်သန်ခွင့်ရရုံကလွဲလို့ ကျွန်တော်တို့မှာ ငွေကြေးဆိုတာ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ လောဘ၊ဒေါသတွေရဲ့အဝေးမှာ အနုပညာ ဖန်တီးခွင့်တွေ ရချင်တယ်။ လူ့ဘ၀ရဲ့ ရှင်သန်ခြင်းမှာ ဘယ်ဟာက အနှစ်သာရလဲလို့ မေးရင် ကျွန်တော်ကတော့ အနုပညာ ဖန်တီးခွင့် ရနေခြင်းက အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးပဲလို့ ပြောမယ်။ ကိုငှက်ကရော..........။ မေးစရာတောင် လိုမယ်မထင်ပါဘူး။
" ညီလေး အခုရေးထားတာ ဘာရှိလဲ "
ကျွန်တော်က မေးစရာမလိုဘူးလို့ တွေးနေတုန်း ကိုငှက်က ကျွန်တော့်ကို မေးနေပြီ။
" ရှိတယ် အစ်ကို။ အစ်ကို့အတွက် ကျွန်တော်ရေးထားတာ။ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ "
" ဖတ်ကြည့်လို့ ရမလား "
" ဟာ-သိပ်ရတာပေါ့ အစ်ကို။ အစ်ကို ဖတ်မယ်ဆို ကျွန်တော်က ပိုတောင် ပျော်ဦးမှာ "
ပြောပြီး ကျွန်တော်က ကဗျာစာရွက်ကို ကိုငှက်လက်ထဲ လှမ်းထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ကိုငှက်ရဲ့ မျက်လုံးတွေ အရောင်လက်နေတယ်။ စာရွက်ရဲ့ ထိပ်ကနေ အောက်ခြေအထိ အသံမထွက်ဘူး။ တိတ်တိတ်လေး ဖတ်နေတယ်။ အဆိုတော် တေးရေးဆရာ၊ ဂီတပညာရှင် တစ်ယောက်ရဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို အသံတိတ်ခံစားမှု။ ကျွန်တော် အသက်တောင် မရှူမိချင်ဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို တိတ်ဆိတ်ပေးထားတယ်။ အာရုံလေ။ ကျွန်တော်က ဒီကဗျာကို ဖန်တီးသူ။ ကိုငှက်က ကျွန်တော့်အနုပညာကို ခံစားသူ ဖြစ်နေပြီ။
ကိုငှက်က ဖတ်ပြီး ကျွန်တော့်လက်ထဲကို စာရွက်ကို ပြန်ထည့်ပေးတယ်။ ဘာမျှ မပြောဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ကြားမှာ ဘာမျှ ပြောစရာမလိုဘူးလို့ထင်တယ်။
" အနုပညာ အားကောင်းရင် လူသေလည်း နာမည်ကျန်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ် အစ်ကို။ အဲဒီအတွေးနဲ့ ကျွန်တော် ရေးထားတာပါ။ အနုပညာသမားတွေဟာ ကမ္ဘာမြေရဲ့ တစ်နေရာမှာတော့ ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် အနုပညာတွေ ထပ်ထပ်ပြီး ဖန်ဆင်းနေဦးမယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံတယ်။ လူသေပေမယ့် အနုပညာ ပစ္စည်းတွေကတော့ ကျန်ခဲ့သေးတာပဲလေ "
" ကြယ်တွေစုံပြီလား..........ဗင်းဆင့်အနားကို လာကြတယ်.......မျက်စိကနေ ငါကြားတယ်"
ကြည့်ပါဦး။ ကျွန်တော့်စကားအဆုံးမှာ ကိုငှက်က သူ့ရဲ့ 'အရင်အတိုင်း' အခွေထဲက ၀င်းမင်းထွေး ရေးထားတဲ့ 'ဗင်းဆင့်ဗန်ဂိုးတမ်းချင်း' ကို အားရပါးရ ဆိုချလိုက်တာ.........။ ကျွန်တော်သိတယ်။ သူ့ကို ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာ၊ လူသေပြီးမှ အနုပညာအားကောင်းခဲ့တဲ့ ဗင်းဆင့်ဗန်ဂိုး။ ဒါတွေကို ဆက်စပ်တွေးရင်း ကိုငှက်က အနုပညာ အမြဲရှင်သန်နေသူပဲလို့ ကျွန်တော်တွေးရင်း သီချင်း လိုက်နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။
" လောလောဆယ် ညီလေးနားထောင်ဖြစ်ရင်း အစ်ကို့သီချင်းတွေထဲက ဘယ်သီချင်းကို ကြိုက်လဲ "
ကိုငှက်က သူဆိုချင်တဲ့ သီချင်းတွေထက် ကျွန်တော်နဲ့ သူနဲ့ ခံစားမှုချင်း နီးစပ်တဲ့ သီချင်းကို ပိုဆိုချင်တယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ ကျွန်တော်ပါ လိုက်ဆိုလို့ ရနေတာကိုး။
" တစ်ပုဒ်မဟုတ်ဘူး အစ်ကို။ နှစ်ပုဒ်။ ပထမတစ်ပုဒ်က 'အိပ်မက်ထဲက ရထားကြီး' ဆိုတဲ့ သီချင်း။ လောလောဆယ် ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ လူ့ဘ၀ကြီး၊ အရွယ်ရဲ့ ခံစားမှု၊ အဲဒါတွေက အဲဒီအထဲမှာ ပါတယ်အစ်ကို "
" ညီလေးက အရွယ် ဖြည်းဖြည်းရလာပြီကိုး။ အဲဒါ အရွယ်က ပေးတဲ့သီချင်းလေ "
" စကားမစပ် ကျွန်တော်က တစ်ရက်၊ ခုနစ်လဖွား။ အစ်ကိုနဲ့ မွေးနေ့တူလေ။ ကျွန်တော့်မွေးနေ့တိုင်းမှာ အစ်ကို့မွေးနေ့ရှိတယ်ဆိုပြီး ကဗျာတစ်ပုဒ်၊ တစ်ပုဒ် အမြဲချရေးဖြစ်တယ်။ ဒီနောက်ပိုင်းတော့ မရေးဖြစ်တော့ဘူး"
" ဟုတ်လား။ ဒါနဲ့ ညီလေး ကြိုက်တဲ့ နောက်သီချင်းတစ်ပုဒ်က......"
" လမ်းပျောက်တဲ့သား "
"ဪ" ဆိုပြီး ကိုငှက် ခေတ္တငြိမ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ဟိုးအဝေးကို ကြည့်သလိုမျိုး ခပ်တွေတွေလေး ငေးနေတယ်။
" ကျွန်တော်လည်း အစ်ကို့လိုပဲ အမေကို သိပ်တွယ်တာတာ။ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အခက် အခဲတွေ တော်တော်ကြုံခဲ့ဖူးတယ်။ လူတွေကို တစ်ခါတစ်ခါ စိတ်နာတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ခွင့်လွှတ်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်နေနေ ကျွန်တော် အမေ့ကို သတိရတယ်။ ကျွန်တော် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ဘာသာတော့ ကျွန်တော်ဟာ လမ်းပျောက်နေတဲ့ သားတစ်ယောက်လို ခံစားရတယ်။ အဲဒီသီချင်းနားထောင်တိုင်း ကျွန်တော် မျက်ရည်ဝဲမိတယ်။ အရမ်းခံစားရရင် မျက်ရည်တွေ ပါးပေါ်ကို စီးကျလာတယ်။ ကျွန်တော် ငိုမိလား၊ မငိုမိဘူးလား မသိဘူး "
ကျွန်တော့် စကားအဆုံးမှာ ကိုငှက်က တီးလုံးတစ်ခုကို အစပြုလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နှုတ်ကနေတိုးတိုးဖွဖွ စရေရွတ်တယ်။ ကျွန်တော်သိတယ်။ 'လမ်းပျောက်တဲ့သား' ကို ကိုငှက် စနေပါပြီ။
" လူရယ်ခေါ်စဉ် အဆုံးအစ မရှိတဲ့ လမ်းပေါ် အခြေချရင်း......မရည်ရွယ်တာတွေ ဖြစ်တတ်မှန်းလည်း မသိနိုင်ခဲ့ဘူး အမေ....."
ဒီတစ်ခါတော့ ကိုငှက်က ခံစားသူ ဖြစ်နေပါရော့လား။ သူ့မျက်ဝန်းတွေ ရီဝေနေလေရဲ့။ ကိုငှက်ကလည်း အမေတွယ်တာသူ တစ်ယောက်ပဲလေ။ ဒါပေမဲ့ ကိုငှက် လမ်းမပျောက်ခဲ့ပါဘူး။ လမ်းပျောက်ခါနီး ကိုငှက်အမေက ငွေတွေထုတ်ပေးလိုက်တာ ကိုငှက်ရဲ့ နာရီပေါ်က မျက်ရည်စက်များ အခွေစထွက်လာတာပဲလေ။
" ညဉ့်တော်တော်နက်နေပြီနော်ကွ ညီလေး "
ကျွန်တော် နာရီကြည့်လိုက်တယ်။ ခုန ကျွန်တော်ကြားနေတဲ့ အသံက အခု ရပ်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ.......။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ နာရီမရှိဘူးလား။ ကျွန်တော်တို့ အနုပညာကို ခံစားမယ်။ ဆွေးနွေးမယ်။ နာရီမလိုဘူးလေ။ ရာသီလည်း မလိုဘူး။ အနုပညာဟာ အနုပညာပဲပေါ့။
" အစ်ကို နားချင်ပြီလား "
" နားချင်တာ မဟုတ်ဘူး ညီလေး။ အစ်ကို ပြန်တော့မှာ "
ဟုတ်သားပဲ။ ကိုငှက် ရောက်နေတာ တော်တော်ကြာသွားပြီပဲ။
" အစ်ကို နောက်ထပ်လာဦးမလား။ ကျွန်တော် မျှော်နေမယ်။ အစ်ကိုနဲ့ ကျွန်တော် မဆိုရသေးတဲ့ သီချင်းတွေ ထပ်ဆိုမယ်လေ။ ဂီတနဲ့ ကဗျာတွေ အကြောင်း ထပ်ပြောရအောင် အစ်ကိုရာ။ ကျွန်တော့်မှာ အဲဒီလို ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးပဲ။ သူတို့လည်း အစ်ကို့ ပရိသတ်တွေပါ "
ကိုငှက် အဝေးကို ငေးရင်း ကျွန်တော့်ကို မဖြေပါဘူး။ ဂစ်တာကို ကျွန်တော့်လက်ကို ပြန်ပေးတယ်။
" အစ်ကို့သီချင်းတွေ ညီလေးတို့ ရနေတာပဲကွာ။ အစ်ကို ရှိသလိုပေါ့ "
" ဒါတော့ ဒါပေါ့အစ်ကိုရာ။ အမေ့အိမ် လိုသီချင်းမျိုးကို အစ်ကို စင်ပေါ်မှာဆိုတာ နားထောင်ချင်သေးတယ် "
ကိုငှက် က တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်တယ်။ ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာ လွန်များ သွားလားလို့ စဉ်းစားနေမိပါတယ်။
" အနုပညာဆိုတာ လူသေလည်း ကျန်နေခဲ့တယ်လို့ ညီလေးပဲ ခုန ပြောတယ်လေ။ အမေ့အိမ်က ညီလေးတို့နဲ့ တစ်သားတည်း ရှိနေပြီပဲ "
" ဟုတ်တယ် အစ်ကို။ အမေ့အိမ် က ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်။ ဂျပ်ဆင်ထိပ်က လရိပ်ပြာကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တက္ကသိုလ်တွေမှာ အမြဲသာနေတယ် အစ်ကို။ မဟာဝီရ အို-ဗုဒ္ဓကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးထိပ်ထက်မှာ အမြဲရှိတယ်အစ်ကို။ ပြီးတော့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် ဆိုတဲ့ စာသားလေးကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နှလုံးသားမှာ အမြဲရှိနေမှာပါ အစ်ကို "
ကျွန်တော့် စကားအဆုံးမှာ ကိုငှက်က လက်ပြနှုတ်ဆက်ရင်း နေရာကထတယ်။ ကျွန်တော်က တံခါးကို အသာအယာ ဖွင့်ပေးပြီး အိမ်အပြင် အရောက်လိုက်ပို့ပေးပြီး မျက်လုံးက မထင်မှတ်ဘဲ ကောင်းကင်ကို ကြည့်မိတယ်။ ကြည့်ပါဦး........ကြယ်တွေ စုံနေလိုက်တာ.......။
ကိုငှက် ကျွန်တော့်ကို လှည့်ကြည့်တယ်။ ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ်။ ကိုငှက် ကျွန်တော့်ကို ကြယ်တွေစုံတဲ့ည သီချင်းလေး ဆိုပြချင်နေသေးတာလို့ ကျွန်တော်သိတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ကိုငှက်ကို ကြယ်တွေစုံတဲ့ညမှာ သူ့သီချင်းတွေကို ပြန်ဆိုပြချင်ပါသေးတယ်။
" နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့ အစ်ကိုရာ " လို့ ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ ကိုငှက် ခေါင်းညိတ်တယ်။ ပြီးတော့ အမှောင်ထဲမှာ လက်ပြ နှုတ်ဆက် ထွက်ခွာသွားတော့တယ်။
ကျွန်တော် ၀ရန်တာမှာ ရပ်ရင်း မြူနှင်းမရှိတဲ့ အရပ်ကနေ စိတ်ထဲမှာ မြူနှင်းတွေ ရှိသယောင် ခံစားနေမိတယ်။ သီချင်းသံ သဲ့သဲ့က ပြေးဝင်လာပြန်ရော......။
ကြည့်ပါဦး။ ဟိုး ခပ်လှမ်းလှမ်းက လွင့်လာတဲ့ ကိုငှက်အသံလေ။ ကိုငှက် တခြားတစ်နေရာမှာ သီချင်းဆိုနေပြန်ပြီ။ အခုပဲ ရုတ်တရက် ထွက်သွားပြီးမှ............။
ကျွန်တော့်အခန်းထဲကို ပြန်ဝင်ပြီး အိပ်ရာပေါ်လှဲမယ်အလုပ် ကိုငှက်ဖတ်သွားတဲ့ ကဗျာစာရွက်ကလေးကို မြင်ပြီး တစ်ခေါက်လောက် နှုတ်က ပြန်ရွတ်ဖတ်နေမိတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ အသံထွက်ပြီး ကျွန်တော့်ကဗျာကို ခံစားတာပါ။ ရယ်ရသားပဲ။ အဆိုတော်က ကဗျာကို အသံတိတ်ဖတ်ခဲ့ပြီး ကဗျာရေးသူကတော့ သူ့ကဗျာကို နှုတ်က ရွတ်ဖတ်တယ်တဲ့လေ။ တကယ်တော့ ကိုငှက်ကို ပြန်ကြားစေချင်တာပါ။ ကျွန်တော်က သူ့သီချင်းတွေ အများကြီး နားထောင်ခဲ့ဖူးတော့ ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ကဗျာကို အဝေးရောက်သွားတဲ့ ကိုငှက် ပြန်ကြားစေချင်တာပါ။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော့်ကဗျာကို တစ်ကြောင်းချင်း တီးတိုးရွတ်မိတော့တယ်။
သူ အဆုံးမဲ့ သီချင်းတွေ ဟိုးအဝေးမှာ ထပ်ရေးနေတာပါ။
အသိအမြင် ၀င်သက်ထွက်သက် တန့်သွားတာ
သူ့ ၀ိဥာဉ် ရှင်လျက်ဆက်လျက် ဂီတသစ်တွေ ဖန်တီးဖို့ ခရီးဆန့်တာပါ။
လူတွေရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ သူ့ကိုတွေ့နေတယ်
လူတွေရဲ့ နှုတ်ခမ်းထဲမှာ သူ့အကြောင်း ရှိနေတယ်
လူတွေရဲ့ ခန္ဓာထဲမှာ သူ့အတွေးတွေ စီးနေတယ်
လူတွေရဲ့ နှလုံးသားမှာ သူ့သီချင်းတွေ ခိုနေတယ်
လူတွေရဲ့ ၀င်သက်ထွက်သက်မှာ သူ့ဂီတကို ငြိနေတယ်။
ဧရာဝတီ အကြောင်းပြောရင် သူရှိမယ်
ဂီတအကြောင်း ပြောရင် သူရှိမယ်။
ကောင်းကင် အမိုးအောက်မှာ ထိုးထွက်ပျံသန်း
ငှက်တို့ရဲ့ လမ်းလို အနှောင်အတင်း ကင်းမဲ့လို့
လောကရဲ့ ဟို့တစ်နေရာမှာ သူရှိနေမှာ။
နေ့နဲ့ညဆိုတာ ဂီတခရီးအတွက်လို့ ထင်ခဲ့သူ
လူတကာရဲ့ နှလုံးသားတွေ လတ်ဆတ်နေဖို့
ဗီဇ သူ့မှာရှိပေမယ့် ရုတ်တရက် ရပ်သွားခဲ့သည့်တိုင်
လူတွေရဲ့ သွေးသားထဲကို နစ်မြုပ်စီးမွေ့မယ့် သီချင်းတွေ
ကမ္ဘာမြေကြီး ရှိနေသရွေ့ သူအမြဲမွေးထုတ်ဖန်ဆင်းနေလိမ့်မယ်။ ။
အဲဒီကဗျာကို တစ်ကြောင်းချင်းစီ ဖတ်ပြီး ကိုငှက်ကြားနိုင်မလားလို့ ကျွန်တော်တွေးနေမိတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်..........။ ကျွန်တော် ဒီကဗျာကို ရေးပြီး ကဗျာခေါင်းစဉ်ကို ချက်ချင်းရခဲ့တယ်။ တစ်ခုတည်းပါ။
" လွတ်မြောက်ခြင်း....ငှက် "
ဒါပေမဲ့ ကဗျာရေးပြီး ခဏအကြာမှာ နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုက ထပ်ပေါ်လာပြန်ရော။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော့်ကဗျာက ခေါင်းစဉ် နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။
" လွတ်မြောက်ခြင်း.......ငှက် (သို့မဟုတ်) ဘယ်သူပြောလဲ......သူသေတယ် "
ကဗျာစာရွက်ကို စားပွဲပေါ်တင်အပြီးမှာတော့ ကျွန်တော် ပင်ပန်းနေလို့ ခုတင်ပေါ် လှဲချ လိုက်တယ်။ နောက်တော့ စိတ်ကို လျှော့ချလိုက်စဉ်မှာ မှေးခနဲ အိပ်ပျော်သွားတော့တယ်။
နောက်နေ့မိုးလင်းတော့ ကျွန်တော့်အိမ်ရှင် သူငယ်ချင်းက ပြောတယ်။
" မင်း မနေ့က အရမ်းယောင်တယ်။ သီချင်းတွေလည်း ဆိုတယ်။ စကားတွေလည်း ပြောတယ်။ အိပ်မက်တွေ မက်တယ်ထင်တယ် "
ကျွန်တော် မျက်နှာသစ်ရင်း ပြုံးလို့ နားထောင်နေလိုက်တယ်။ ဘာမျှတော့ ပြန်မပြောဖြစ်ပါဘူး။
တကယ်တော့ ညက ကျွန်တော် ကိုငှက်နဲ့ စကားတွေပြော၊ သီချင်းတွေ ဆိုဖြစ်ခဲ့တာ ဘယ်သူမျှ မသိပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြောလို့လဲ ဘယ်သူမျှ ယုံမှာမှ မဟုတ်တာ။ ပြောမိရင်တောင် ထူးအိမ်သင်က သေပြီပဲ လို့ ပြောကြမှာ။
အဲဒီအခါ ကျွန်တော် ပြန်ပြောဖြစ်မှာက " ဘယ်သူပြောလဲ......သူသေတယ်" ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်း။ ကျွန်တော့်ကို လူတွေ လာပြောရင် ကိုငှက် မသေဘူးလို့ ကျွန်တော်ပြောမယ်။ လူတွေရဲ့ နားမှာ ထူးအိမ်သင် သီချင်းကို ကြားနေသေးတာ၊ ဂစ်တာဝိုင်းတွေမှာ ထူးအိမ်သင် သီချင်းရှိနေသေးတာ သူသေတာတဲ့လား။ တကယ်တော့ ကိုငှက် လွတ်မြောက်သွားတာပါ။ ပြောရရင် ငှက်တစ်ကောင် လွတ်မြောက်သွားတာပါ။
ကျွန်တော် အိပ်မက်ရင်း ယောင်ပြီး သီချင်းတွေ ဆို၊ စကားတွေ ပြောတယ်ဆိုတဲ့ညက ဘယ်နေ့လဲလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ၁၄ ရက်၊ ဂ လ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။ ကိုငှက်ဆုံးတာ ရှစ်နှစ် ပြည့်တဲ့နေ့လေ။
သူ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့တိုင်းမှာတော့ လွတ်မြောက်သွားတဲ့ ငှက်တစ်ကောင်ကို ကျွန်တော်တို့ ပြန် ရှာဖွေတွေ့နိုင် မယ်လို့ ထင်ရင်း ဘယ်တော့မျှ မသေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးကို ကျွန်တော်တို့ လွမ်းဆွတ်နေမိကြဦးမှာ အသေအချာပါပဲလေ။ ။
[ စာကြွင်း-ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ကို ရေးမယ်လို့ စတည်တာ ကိုငှက်ဆုံးတာ ရှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ ၁၄.၈.၂၀၁၂ နေ့ကပါ။ ဒါပေမဲ့ ကြိုးစားရေးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးတစ်ခုကြောင့် တည်ရင်းနဲ့ အချိန်ကကုန်သွားတော့ အဲဒီနေ့ကို ကျော်သွားပါတယ်။ ဒီကြားထဲ အလုပ်ကပိနေပြန်တာရယ်၊ အာရုံမရရင် မရေးချင်တာရယ်ကြောင့် ဆက်မရေးဖြစ်တာနဲ့ ဒီနေ့မှပဲ လက်စသတ်နိုင်ပါတော့တယ်။ ကိုငှက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကောင်းဆုံး ပေးဆပ်ချင်တဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်ကြောင့်ပါ။ ကိုငှက်နှစ်ပတ် လည်နေ့ကို ကျော်ပြီးမှ တင်ဖြစ်တဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုငှက် အမှတ်တရအဖြစ် ကျွန်တော် ရေးပြီးနိုင်ခဲ့လို့ ဖတ်တဲ့သူ ရင်ထဲကို တစ်စုံတစ်ခု ရောက်သွားတယ် ဆိုရင် ကျေနပ်ပါပြီ။ ]
Posted by ဆူးသစ် at 4:27 PM5comments
+ တစ်ခါတစ်ခါ လူတွေနှင့် စကားပြောရသည်က ပညာတွေ တစ်လှေကြီးရသည်ဟုထင်မိသည်။ သူတို့၏ မနာလိုမှု၊ သူတို့၏ ဖိနှိပ်ချင်မှု၊ သူတို့၏ ကိုယ်ချင်းမစာမှုမျိုးကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း သိခွင့်ရလိုက်သည်။ ဖုန်းပြောရင်းနှင့်ပင် လေ့လာမိလိုက်သည့်အခါမျိုးရှိသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဇနီးသည်ကိုတောင် လူတချို့၏ စိတ်ဓာတ်ကို သင်ယူတတ်ဖို့ ပြောပြထားမိသည်။ လူဆိုသည်က ကိုယ်ကသာ အမြဲအသာစီးရချင်နေသူများဟု ထင်၏။ အတ္တဟုဆိုရလေမည်လား မသိ။ ကိုယ့်အတ္တနှင့်ကိုယ်ဆို အကြောင်းမဟုတ်။ သူများကို သွားသွား ထိနေသည်ကတော့ လူတောထဲမှာ မသင့်တော်လှ။ ထိုလိုလူတွေ များလာလျှင် တော်တော် စက်ဆုပ်ဖို့ကောင်းပေတော့မည်။ ကျွန်တော်ကတော့ သူတို့ကို လွှတ်ထားပေးရင်း ကိုယ့်ဘာသာ သင်ယူမိသည်။ ဘ၀က စင်ကာပူတစ်နေရာ တည်းနှင့် ပြီးတာမဟုတ်။ သည်လိုပြီးကြကြေးဆိုလည်း အကောင်းသား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထိုသို့သော သူများနှင့်တွေ့လျှင် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲက ကျိတ်၍ပြုံးနေတတ်သည်။ သူတို့က စကားလုံး အကြီးကြီးများလည်း သုံးတတ်သည့်အခါ ပို၍ ရယ်ချင်စရာသာ ကောင်းတော့၏။ ကိုယ်အောင်မြင်နေသည့်အခါ ကမ္ဘာကြားအောင်အော်၍ ကိုယ်ကျရှုံးသည့်အခါ တုံးအောက်ကဖားလိုတော့ မလုပ်ကြေး။ ကျွန်တော် ဆုတောင်းပေးပါသည်။ အမြဲတမ်းကမ္ဘာကြားအောင် အော်နိုင်ပါစေဟု။ ထပ်ဆောင်းရလျှင် အတ္တ ကင်းစွာဖြင့်သာ အော်နိုင်ပါစေဟု။ အဘယ့်ကြောင့်ထိုသို့ဆိုရသနည်းဆိုလျှင် စင်ကာပူဆိုသည်က ပြိုင်ကွင်းသေးသေးလေးဟုသာ ကျွန်တော်ထင်သောကြောင့်ပင်။( ဧပြီလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် )
+ သူများတွေက ၂ ကျပ်ဖိုးပေးပြီး အသားကုန် Talk နေချိန်မှာ ကိုယ်ကတော့ ကြားရလား.....ကြားရလား အော်ရတာနဲ့ မျော့ နေပြီ။ ကိုယ့်ဆီက ဖုန်းလိုင်းတွေ ပြောပါတယ်။ ( ဧပြီလ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် )
+ သည်အပတ်ထဲမှာ သင်္ကြန်မိုးကို ပြန်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်တစ်ရက်မှာ တခြားမြန်မာကား တစ်ကားကိုကြည့်သည်။ ခံစားမှုကမတူ။ သင်္ကြန်မိုးလို ကားမျိုးက ကြည့်နေရင်းမှာပင် ပြီးသွားမှာကို စိုးနေရသည်။ ဒါရိုက်တာက မောင်တင်ဦး။ နောက်ကြည့်သည့် မြန်မာကားက ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်)။ သူ့ကိုလည်း သည်ဘက်ခေတ် ကားတွေမှာ တော်တော် သဘောကျခဲ့သည်။ သို့သော် ကြည့်နေသောမြန်မာကား၏ တစ်နေရာမှာ မင်းသားက စကားမေ့နေသည်ကို သူကဘေးက ချပေးနေသော အသံကြီး ပါလာသောအခါ ကြည့်ရသည်က နင်သွားသည်။ သည်တော့ ပြန်သုံးသပ်ကြည့်သည်။ စီနီယာနှင့် ဂျူနီယာ ကွာတာတွေတော့ ရှိသေးသည်ဟု။ မောင်တင်ဦးကောင်းသည်ကို လက်ခံသော်လည်း ဘဘဦးသုခ ကားတွေကို သည်နေ့အထိ မမေ့နိုင်ခြင်းကလည်း ဒါပဲဖြစ်မည်ဟု ကောက်ချက်ချမိတော့သည်။ (ဧပြီလ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် )
+ ဘူကုန်းမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်မှာ ယခုပရောဂျက်သည် ဒုတိယမြောက်ဖြစ်သည်။ ပထမပရောဂျက်မှာ ဘူကုန်းကျွန်း ဘယ်လောက်ပူသလဲ သိခဲ့ရ၏။ Jurong Island ထက်ကို ပိုပူသည်။Jurong Island က မိုးများသလောက် ဘူကုန်းက မိုးမရွာ။ ရွာခဲသည်ဟု ဆိုရမည်။ ဘူကုန်းမှာ မိုးခေါင်တာကြားဖူးပြီဟု မေမြို့မိုး သီချင်းကို ပြောင်းဆိုရလေမည်။ စင်ကာပူဘက် (သူတို့အခေါ် Main Land)ကတော့ မိုးအကောင်းဆုံး။ သစ်ရိပ်ပေါသည်ကိုး။ မနေ့က စနေမှာ အလုပ်နားပြီး သည်နေ့တနင်္ဂနွေမှာ အလုပ်သွားဆင်း ခဲ့ရတော့ အလုပ်သမားလေးတွေက မနေ့ကနေ့ခင်းမှာ မိုးက သည်းကြီးမည်းကြီး ရွာသည်တဲ့။ သူတို့ပျော်ကြလေမည် ဟုတွေးမိ၏။ မိုးရွာမှ နားရသည်ကိုး။ ကိုယ်တောင်အိမ်မှာနေရင်း မိုးသည်းတာ သဘောကျခဲ့သေးသည်။ သည်နေ့ ကိုယ်ဆင်းရသည့်အလှည့်မှာ မိုးရွာမလားမျှော်ခဲ့သေး၏။ ပူလွန်း၍ ကိုယ်လည်းနားချင်သည်။ သို့သော် ကိုယ့်အလှည့်ကျတော့ မိုးကမရွာ။ရှေးလူကြီးများက ကံဆိုးမသွားရာ မိုးလိုက်လို့ရွာလို့ဆိုကြသည်။ ကံဆိုးချင်ဆိုး မိုးရွာလျှင်ပြီးရောဟု ဆိုချင်ပါလျက် မိုးကမရွာ။ မိုးမရွာ၍ မနားရသောအခါ ကိုယ့်ကံမကောင်းဟု ထင်မိပြန်၏။ ရှေးလူကြီးများ စကားနှင့်ဆိုလျှင် တော်တော်ကန့်လန့်နိုင်လေသည်။ ကိုယ့်ကံကကောင်းလွန်း၍ပဲ မိုးကမရွာသလိုလို။ သို့သော် တကယ်တမ်းကျတော့ ကိုယ့်အတွက် မကောင်း။ နေပူထဲမှာ လုပ်နေသော အလုပ်သမားလေးတွေကို လွှတ်မထားတတ်၍ လိုက်ကြည့်မိပြန်၏။ တစ်နေကုန် ကိုယ်ပါပင်ပန်းတော့သည်။ ကံဆိုး၍ မိုးလိုက်ရွာသေးသည် ဆိုလျှင် မိုးမရွာလည်း ဘာလို့ ကံမကောင်းတာလဲ ဟုရှေးလူကြီးများကို စောဒကတက်ချင်သေးသည်။ ( ဧပြီ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် )
+ ဒီလိုညမှာ Happy New Year လို့စောင့်ပြီးအော်တဲ့ မြန်မာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမှာပါလိမ့်......။ ( ဧပြီလ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သင်္ကြန်အတက်နေ့)
+ သည်နေ့ အလုပ်ကအပြန် ကိုယ့်ရှေ့မှာ စလုံးကောင်လေးတစ်ယောက်က Civil Defence ၀တ်စုံကလေးနှင့် လမ်းလျှောက်နေတာတွေ့သည်။ သူ့ကြည့်တော့ ကိုယ့်ထက်တော်တော်ငယ်၍ ဪ-သူတို့နိုင်ငံသားများ မထမ်းမနေရ တာဝန်ကို ယူရ၍ ထမ်းရသော်လည်း ငယ်ပါသေးလားဟုတွေးသည်။ မနိုင်ဝန် ထမ်းနေရသည်ဟု ထင်မိသည်။ သည်လိုထင်နေရင်းမှာပင် သူ့နောက်က ကျောပိုးအိတ်နှင့် လျှောက်နေသော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ပြန်သတိထားမိလိုက်၏။ သူများသာ ပြောနေတာ။ ကိုယ့်အိတ်ထဲမှာလည်း အလုပ်က ယူနီဖောင်းနှင့်။ အိတ်က ခပ်လေးလေး။ ပြီးတော့ ထမ်းထားရသောတာဝန်များ။ ဘ၀အတွက်ကျန်နေသေးသော အလုပ်တာဝန်များ။ မိသားစု အတွက်၊ ဘာအတွက်၊ ညာအတွက်။ နောက်ဆုံးပြန်ချုံလိုက်သည့်အခါ စလုံးလေးထမ်းထားရသည့် တာဝန်က မဖြစ်မနေဟု ဆိုသောကြောင့်သာ ထမ်းနေရပြီး ကိုယ်ကျတော့ ဘယ်သူမှ မဖြစ်မနေဟု မပြောဘဲနှင့်ကို ကိုယ့်ဘာသာ မဖြစ်မနေ ထမ်းနေရသောအခါ အရွယ်၊ တာဝန်ဆိုသည်မှာ ယူသင့်ယူထိုက်သည့်အချိန်မှာ ယူကိုယူရမည်ဟု နားလည်ရင်း စလုံးလေးကို သနားနေရာမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ ပြန်သနားနေမိတော့သည်။ ( မေလ ၄ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်)
Posted by ဆူးသစ် at 7:56 PM6comments
" မိုးရယ်၊ ၀ါဆိုရယ်၊ အလွမ်းရယ်၊ သီချင်းတစ်ပုဒ်ရယ် "
ဩဂုတ်လထဲက တစ်ရက်မှာ စင်ကာပူက ကျွန်တော်တို့လုပ်ကွက်ထဲမှာ မိုးတွေ ညို့တက်လာတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ နေ့ခင်းလည်းကျရော မိုးက မရွာဘဲ ပျောက်သွားပါလေရော။ မိုးက ဇူလိုင်လထဲမှာ သည်းကြီးမည်းကြီး တစ်ခါနှစ်ခါ ရွာလိုက်ပြီး နောက်တော့ စင်ကာပူထုံးစံ နေကပြန်ပူ ပါတော့တယ်။ မိုးကိုမျှော်နေကြတဲ့ ကျွန်တော်အပါအ၀င် အလုပ်ထဲက လူတွေအတွက်တော့ အားလျော့စရာပါ။
ကျွန်တော်က ဒီမိုးက ဘာမိုးလဲ မသိဘူး။ မရွာဘဲ မည်းလာပြီး လစ်ပြေးပြီဆိုတော့ အလုပ်ထဲက ကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့ မြန်မာတစ်ယောက်က အဲဒါ သမုဒယ ၀ါဆိုမိုးလေ ဆိုပြီး နောက်ပါတယ်။ အားလုံးက ၀ိုင်းရယ်ကြတာပေါ့။ သူပြောတာ ဗညားဟန်ဆိုတဲ့ အဆိုတော် ဆိုထားတဲ့ နာမည်ကြီးသီချင်းကိုး။ တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာ မြန်မာပြည်က မိုးနဲ့ ၀ါဆိုလကို သတိရသွားပါတယ်။
ကျွန်တော့် ဇနီးသည်နဲ့ ဖုန်းပြောတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ကို ဖုန်းခေါ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်နားမှာ မိုးသံတွေကြားနေရတယ်။ ဒီနှစ် မိုးကောင်းတယ်လို့ အားလုံးပြောကြတယ်။ ရေတွေလည်း လျှံနေပြီကိုး။ ကျွန်တော် အဲဒီမိုးကိုလည်း ချစ်တယ်။ ဟိုးတုန်းက မိုးတွေရွာပြီဆို ကော်ဖီတစ်ခွက် ဖျော်မယ်။ သောက်မယ်။ စာဖတ်မယ်။ စာရေးမယ်။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ရှေ့က မြောင်းမှာ မိုးရေတွေစီးနေတာကို ငေးမယ်။
ကျွန်တော့်ကို ၀ါဆိုလမှာ မွေးတာ။ ဒါကြောင့်များ ၀ါဆိုလ မိုးရေတွေကြားမှာ ကျွန်တော်ကြည်နူးနေမိ တာများလား။ ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်ကရွတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ၀ါဆိုဝါခေါင် ရေတွေကြီးလို့ သပြေသီးမှည့် ကောက်စို့ကွယ် ဆိုတဲ့ကဗျာလေးက ကျွန်တော့် နှုတ်ဖျားကို ရံဖန်ရံခါ ရောက်လာတတ်တယ်။
ပြီးတော့ ကျွန်တော်သိနေ၊ရနေတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်။ အဲဒီသီချင်းကလည်း ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားကို အလိုလို ရောက်လာတတ်တယ်။
မိုးအုံ့ရင်၊ သစ်ရွက်လေးတွေ ငြိမ်နေရင် တစ်ယောက်ယောက်ကို သတိရနေမိတယ်။ ပုန်းညက်ပန်းတွေလည်း ပွင့်တော့မယ်။ ပြီးရင် ငွေရောင်အဆင်းရှိတဲ့ မိုးစက်မှုန်တွေ ကျဲဖြန့်တော့မှာလေ။
အဲဒီအချိန်မှာ အခန်း ပြူတင်းပေါက်ကနေ လှမ်းကြည့်လိုက်ရင် အိမ်ရှေ့က ခရေပင်မှာ မိုးခိုဖို့ ရောက်လာကြတဲ့ ငှက်ကလေးတွေကို လှမ်းမြင်ရတယ်။ သူတို့ မိုးခိုရင်း စကားတွေ ဖွဲ့တော့မှာပေါ့။ အဲဒီအချိန်မျိုးဆို ခရေပင် ခြေရင်းမှာ စကားပြောဖူးခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူတွေလည်း ဒီလို ရာသီမျိုးကို သတိရနေတော့မှာ။
ဒီလိုအချိန်မှာပဲ ရှစ်ရပ်ရှစ်ခွင် မိုးရိပ်တွေ ဆင်လာမယ်။ မိုးတွေ ခြိမ်းလာမယ်။ ပြီးတော့ မိုးတွေ ရွာလာမယ်။ အဲဒီအချိန် ချစ်သူကို သတိရနေမိမယ်။ ပြူတင်းပေါက်က ငေးနေရင်းမှာပဲ မိုးစက်မိုးပေါက်တွေ မျက်နှာကိုလာစဉ်မယ်။ မိုးစက်လေးတွေရဲ့ အထိအတွေ့။ နူးညံ့နေမယ်။ ဒါ အေးမြတဲ့ မိုးလေ။ ဒါပေမဲ့ မိုးစက်လေးတွေ ငိုတာလား။ ချစ်သူကိုလွမ်းတဲ့သူက ငိုတာလား။ ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ။
တံစက်မြိတ်မှာ သစ်ခွပန်းတွေ ပွင့်ပြီ။ မိုးနဲ့အတူ ငွေစံပယ်တွေလည်း လန်းလာပြီ။ သစ်ခွတွေ ပန်ခဲ့သူကို သတိရတယ်။ စံပယ်ရုံတွေဘေးကနေ တစ်ယောက်သောသူကို သတိရတယ်။ အဲဒီအချိန်က ၀ါဆိုရယ်၊ မိုးရယ်၊ အလွမ်းရယ် အားလုံး အချိုးညီညီနဲ့ ပေါင်းထားတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေမလားဘဲ။
ဒီလိုခံစားမှုတွေကို သီချင်းတစ်ပုဒ်မှာ သွားမြင်ရတယ်။ ကျွန်တော်ခံစားမိတယ်။ သီချင်းလေးက မြန်မာ ဆန်တယ်။ ရေးသူကလည်း နိုင်မြန်မာ တဲ့။ ဆိုသူက မိုးသက်တင်။ မူရင်းက သူတစ်ယောက်တည်း ဆိုတာပါ။ နောက်တော့ သူ့ရဲ့ မိုးသက်တင်နှင့် ငွေကြယ်ပွင့်တို့ ဆုံစည်းရာ ဆိုတဲ့ အခွေမှာ ဟေမာနေ၀င်းနဲ့ ပြန်တွဲ ဆိုထားပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မိုးတွေရွာနေတဲ့ ဒီရာသီ၊ ပြီးတော့ ၀ါဆို၊ ပြီးတော့ မိုးရာသီအတွက် အမြဲ ရှိနေတဲ့ ပန်းကလေးတွေ။ ကျွန်တော့်နှလုံးသားမှာ အဲဒီသီချင်းလေးကလည်း အမြဲ ခိုနားနေလေရဲ့။ ခံစားကြည့်ပါဦး။
Posted by ဆူးသစ် at 1:09 PM9comments
" ရင်ထဲထိတဲ့ အနုပညာ "
ပြီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့ ညနေမှာ လုပ်ကွက်ကပြန်တော့ ကျွန်တော့်ဖုန်းကို ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါ ကျွန်တော့်ဖုန်းထဲကို ကျွန်တော်နဲ့ ညီအစ်ကိုလို နေခဲ့တဲ့ ညီလေးတစ်ယောက်ရဲ့ Message ၀င်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ရံဖန်ရံခါ ကိစ္စကြီးငယ်ရှိမှ SMS လှမ်းပို့၊ ဖုန်းခေါ်နဲ့ နေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက် သူ့SMS က ဘာလဲလို့ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမိတာပါပဲ။ သူက စင်ကာပူနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားကို ကူးချည်သန်းချည်လုပ်ပြီး အလုပ်လုပ်နေသူဆိုတော့ သူအားမှ ကျွန်တော့်ဆီဆက်သွယ်တာ။ ဘာအရေးကြီးကိစ္စများရှိလဲ ဆိုပြီး ယူနီဖောင်းလဲရင်းနဲ့ကို သူ့ Message ကို ဖတ်ကြည့်နေမိပါတယ်။ သူရေးထားတာက ဒီလိုပါ။
" ကိုကြီး၊ သဇင်မဂ္ဂဇင်းမှာပါတဲ့ ကိုကြီးရဲ့ ' ကျွန်းသားတစ်ယောက်ရဲ့အိပ်မက် ' ဆိုတဲ့ကဗျာကို ကျွန်တော် ဖတ်ရပါတယ်။ အဲဒီကဗျာဟာ Jurong Island မှာ ကိုကြီးလောက် မကြာပေမယ့် တစ်နှစ်ခွဲလောက်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ အာရုံကို လှုပ်နှိုးလိုက်သလို ပြန်ပြီးအောက်မေ့သတိတရ ဖြစ်စေပါတယ်။ အခုတော့ လူတွေဟာ ကျွန်းပေါ်မှာလုပ်တဲ့ လူတွေရဲ့ ဘ၀ကို ခံစားနားလည် နေလောက်ပါပြီ။ ကျွန်တော် အဲဒီကဗျာကို ကျွန်တော့်ရဲ့ သားနဲ့သမီးကို ဖတ်ပြီး ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ မျက်ရည်တွေဝဲပြီး ငိုတော့မတတ် ခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု သူတို့တစ်တွေဟာ စင်ကာပူက ကျွန်းပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူတွေရဲ့ဘ၀ကို နားလည် သဘောပေါက်သွားကြတယ်လေ။
အားပေးနေပါတယ် ကိုကြီး "
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် သူ့ရဲ့ Message ကို ဖတ်ပြီး ကျွန်တော် ကြည်နူးမိပါတယ်။ ကိုယ့်ကဗျာကို သူတို့ဖတ်မိလို့ ကြည်နူးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထက် ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ Message ကို သူတို့ ရသွားတယ်ဆိုတာရယ်၊ သူတင်မဟုတ်၊ သူ့ကလေးတွေပါ ကဗျာအပေါ်မှာ နစ်ဝင်ခံစားသွားတယ်ဆိုတာ သိရလို့ပါ။
အနုပညာဖန်တီးသူတို့ရဲ့ ထုံးစံ၊ သူများက ကိုယ်ဖန်တီးထားတာကို ပြန်ပြောရင် ကိုယ်လည်း တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်မိပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်ကဗျာကို တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကဗျာက ဒီလိုပါ။
' စင်ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ
ထောင်ကျတာနဲ့ အတူတူပါ ' တဲ့
အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ကျတာ' တဲ့ အမေ။
Jurong Island တဲ့
အဲဒီမှာ သားဘ၀ရှိပါတယ် အမေ။
အရိပ်မရှိ မီးလိုပူလို့ ဟဲလ်မက်သုံးတောင်
Safety မျက်မှန်နဲ့ ဟဲလ်မက်မေးသိုင်းကြိုးနေရာသာ ကွက်ပြီးဖြူလို့
အဲဒါ-ကျွန်းပေါ်က သားဘ၀ နည်းနည်းပါ အမေ။
လျှပ်စီးလက်ရင် အလံတင်လို့ အလံတင်ချိန်နား
ဒီလိုနဲ့ အလံတင်ချိန်၊ မိုးရွာချိန်လေးမျှော်ရင်း
အပြင်မှာ မိုးမရွာ၊ လျှပ်မလက်၊ အလံမတင်
ရင်ထဲမှာပဲ မိုးရွာ၊ လျှပ်အစင်းစင်းလက်လို့
နေပူထဲ ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့နေ့တွေ နည်းမှမနည်းဘဲ အမေ။
ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်းပျော်မဟုတ်တဲ့ ကျွန်းသားတစ်ယောက်ပါ။
မပျော်ပေမယ့် ပျော်သလိုနေရတဲ့ နေရာ
သူ့ဘေးမှာ ကျွန်းတွေက ဟိုတစ်စို့ ဒီတစ်စို့
အဲဒီမှာ နိုင်ငံစုံက သားတို့လို လူတချို့ အလုပ်လာလုပ်ကြ
အဲဒီမြို့က ဘာမှ မပြောပလောက်ပါဘူး အမေ။
Can or Can not နှစ်လုံးတတ်ရင်
လုပ်နိုင်တာ မလုပ်နိုင်တာ အကုန်ပြတ်တဲ့မြို့.....
Already တောင်မဟုတ် Ready လို့ ဖြီးရင်
How are you? လို့ မေးရင် Fine လို့မဖြေ
Good လို့ ဖြေတဲ့မြို့........
အချောင်ခိုတဲ့သူကို အလီဘာဘာလို့ သုံးတဲ့မြို့......
ဘာလုပ်လုပ် Queue ရတဲ့မြို့.....
Queue သာ Queue တယ်
သူတို့ချင်း Neglect လုပ်တဲ့မြို့........
ရွှေတွေရဲ့'လား'နဲ့ သူတို့ရဲ့ ' Lah '
စကားပြောရင်း လားချင်ရင် လားတဲ့မြို့......
ခြင်္သေ့ကို ငါးခန္ဓာပေါင်းထားတဲ့ ကိုယ်လုံးနဲ့အရုပ်တွေ ပေါတဲ့မြို့.....
ကျွန်းမြေမှာ သားလမ်းသလားခဲ့တာ နေ့စဉ်လိုပေါ့ အမေ။
သိကြားမင်း အကျအတက်လည်း မသိ
သင်္ကြန်ကို ရင်မှာ မငြိနိုင်
အိမ်ကို ငွေပို့ဖို့ စဉ်းစားကြည့်ရင် ငိုင်တွေမော
သားက- ထိုင်နေသော လူငယ်တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး အမေ။
ချွေးတွေက နဖူးကနေ ကျချင်ရာကျ
ကြယ်သီးပြုတ်ကို အပ်နဲ့ချုပ်ရင် အမေ့ကို သတိရ
နေပူထဲမှာ လမ်းတွေလျှောက်ရင် အဖေ့ကို တမ်းတ
စုံတွဲတွေတွေ့ရင် ချစ်သူကို လွမ်းရ
ဘောလုံးပွဲတွေကြည့်ရင် ညီအစ်ကိုတွေကို မေ့မရ
မိုးတွေသည်းရင် မြန်မာပြည်ကို မှန်းဆ
ဒီလိုနဲ့ ဘ၀ဘ၀ဆိုတာကို ကြိတ်မှိတ်ဖြတ်သန်း
ကျွန်းသားတစ်ယောက် လွမ်းခန်းက ခပ်ကြမ်းကြမ်းပေါ့ အမေ။
' အိပ်မက်ထဲက ရထားကြီး ' ဆိုတဲ့
ကိုငှက်ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို အမြဲနားထောင်
( ပြီးတော့ သီချင်းထဲကလို)
ကလေးဘ၀ကို မြင်ယောင်ရင်း မဆုံးတဲ့ခရီး
ဘယ်အချိန်ပြီးမှန်းမသိတဲ့ ဘ၀ကို အတွေးခက်
ချွေးစက်များနဲ့ ပျော်ခြင်း၊ မပျော်ခြင်း မရှိတဲ့
တစ်လတစ်လထွက်လာတဲ့ လစာကြားမှာ ရှင်သန်
အိပ်မက်တွေကြားမှာ ကျွန်တော်ဆက်လျှောက်နေပါဦးမယ် အမေရယ်။ ။
( စင်ကာပူနိုင်ငံထုတ် သဇင်မဂ္ဂဇင်း၊၂၀၁၂ ဧပြီလ တွင် ဖော်ပြခံရသော ကဗျာ ဖြစ်ပါသည်။ )
ကျွန်တော်တို့ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်တော့ လူတွေက ငွေရတာပဲ မြင်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ စင်ကာပူဆိုရင် တိုက်ကြီးတွေ၊ အဆောက်အအုံ လှလှတွေပဲ မြင်နေတော့တာ။ ဘ၀တွေ ဘယ်လို ရုန်းကန်နေကြတယ်ဆိုတာ မသိကြပါဘူး။ မြန်မာပြည်ကလူတွေ ပြောတာနားထောင်ရရင် အားရင် သွားပါလား စင်ကာပူကို ဆိုတာချည်းပဲ။
ကျွန်တော် အခုချပြထားတာ စင်ကာပူဆိုပြီး စင်ကာပူရဲ့ ပတ်လည်က ကျွန်းတွေမှာလုပ်နေရတဲ့ လူတွေရဲ့ ဘ၀ပါ။ အလုပ်ကြမ်းသမားတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ ပညာတတ်တွေပါ အဲဒီမှာ ရှိကြပါတယ်။ သူတို့လည်း အတူတူပါပဲ။ ငွေဆိုတာ တစ်ခုကို ရဖို့ ရုန်းကန်နေကြတာပါ။ ငွေရတာ နည်းတဲ့သူနဲ့ များတဲ့သူ၊ အဲဒါပဲ ကွာတာပါ။
ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်တဲ့ကျွန်းတွေကို တချို့ စလုံးမှာ အလုပ်လုပ်နေသူတွေဆို သိတောင်မသိပါဘူး။ နာမည်ကိုတောင် မကြားဖူးတာပါ။ သူတို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ Main Land လို့ခေါ်တဲ့ စင်ကာပူမြို့၊ စင်ကာပူကျွန်းပေါ်မှာပဲ အလုပ်လုပ်နေကြရတာကိုး။
ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်တဲ့ ကျွန်းတွေကတော့ သစ်ရိပ်နည်းပါတယ်။ Project စရင် သဲကွင်းချည်း ထီးတည်းပါ။ နေက Main Land နဲ့ ကွာပါတယ်။ ပင်လယ်နားကပ်နေတော့ ရေငွေ့ရိုက်ပါတယ်။ ပူလွန်းတော့ အသားတွေက တင်းတိပ်တွေလို ကြာရင် မည်းတက်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်းပေါ်မှာလုပ်ရင် မျက်နှာတို့၊ ဘာတို့ ကာတဲ့ အ၀တ်တွေ၊ ဘာတွေ ဆောင်ရပါတယ်။
ကျွန်းပေါ်ကို သွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက် မနက်ဆိုလည်း သူများထက်စောထရတာ များပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အတွက်ကတော့ မိုးဟာ တကယ့်ကယ်တင်ရှင်ပါ။ လျှပ်စီးလက်ရင် နားရပါတယ်။ အလံအနီရောင် တင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ပြောပြောမပြောပြော၊ အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ မိုးရွာချိန်၊ အလံတင်ချိန် မျှော်ပါတယ်။ နားရတာကိုး။ မိုးမရွာ၊ လျှပ်စီးမလက်တော့လည်း ငွေရဖို့လုပ်ရဦးမယ် ဆိုတဲ့အသိနဲ့၊ တစ်နည်းပြောရရင် ကိုယ့်မာနလေး ကိုယ့်ဘာသာ ရိုက်သွင်းပြီး ငါကွ ရှာထားဆိုပြီး လုပ်နေရတာပါပဲ။ ကိုယ့်ဘ၀အတွက်၊ ကျန်တဲ့လူတွေ အတွက်ကိုး။
ဒီကဗျာမှာ ကျွန်တော်ပေးချင်တာ ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ ခံစားမှု၊ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေရဲ့ တခြားနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အနေအထား၊ ကျွန်တော်တို့ နောက်မှာ ရှိနေသူတွေကို ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ စရိုက်တွေကို သိစေချင်မှု၊ အဝေးရောက်နေတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲမှာ အိမ်ကို ဘယ်လောက်လွမ်းနေရလဲ ဆိုတာတွေ စုံနေတာပါပဲ။
ဒီကဗျာကို စရေးတော့ မြန်မာပြည်က မဂ္ဂဇင်းတိုက် တစ်တိုက်ကို ပို့ဖို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ စင်ကာပူကလူတွေကို ပိုခံစားစေချင်တာကြောင့်ရယ်၊ ကျွန်တော်နဲ့လည်း ခံစားချက်ချင်း တူမယ်ထင်လို့ရယ် စင်ကာပူမှာပဲ ထုတ်တဲ့ သဇင်မဂ္ဂဇင်းကိုပဲ ပို့ဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါတောင် တစ်နှစ်ကျော်လောက် စောင့်လိုက်ရပါတယ်။ စာမူခ မပေးပါဘူး။ မဂ္ဂဇင်းနှစ်အုပ် လက်ဆောင်ရပါတယ်။ ဘာတွေ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်တော်က ကဗျာနဲ့ စာပေလောကထဲ စရောက်ခဲ့သူဆိုတော့ အဲဒါတွေက အပရိကပါ။
အခု ကျွန်တော့်ကဗျာကို တကယ်ခံစားလို့ ရတဲ့ လူမျိုးဆီက အသံကို ပြန်ကြားရတာက စာမူခ ဒေါ်လာပေါင်း များစွာ ရတာလို အဖိုးတန်ပါတယ်။ ထပ်ပြီး တန်ဖိုးရှိတာက အဲဒီညီလေး သူ့သားသမီးတွေကို ကျွန်တော့်ကဗျာကို ရှင်းပြခဲ့တာပါ။ ကြည့်ပါဦး။ သူတို့လေးတွေရဲ့ နူးညံ့တဲ့ နှလုံးသားမှာ သူ့အဖေလို စင်ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေရဲ့ ဘ၀ကို ခံစားနားလည်တတ်သွားပါပြီ။ သူတို့က ဒီမှာ ပညာသင်နေတာကိုး။
နောင်တစ်ချိန် သူတို့ဒီမှာ ကြီးပြင်းလာရင် ကျွန်တော်တို့ထက် မြင့်မြတ်တဲ့ တစ်နေရာမှာ၊ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက် အကျိုးများစွာ ဖြစ်ထွန်းမယ့်အလုပ်တွေ လုပ်ပေးနိုင်မယ့်နေရာမှာ သူတို့နှလုံးသားတွေ လန်းဆန်းရှင်သန်ရင်း အလုပ်တွေ ပိုလုပ်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ်။
နိုင်ငံခြားဆိုတိုင်း သူတို့ရင်ထဲမှာ အထင်မကြီးမိဖို့ သူတို့သိတတ်မယ်လို့လည်း ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ သူတို့ ဒီမှာပညာသင်နေတာ သူတို့အတွက်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် နောင်တစ်ချိန်မှာ အဲဒါ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် ပဲလို့ သူတို့ သိလာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ချင်မိတယ်။
ဒီကဗျာကနေတစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့လို မြန်မာပြည်ကလူတွေ နိုင်ငံခြားမှာ ထွက်အလုပ်လုပ်နေတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ ထိထိမိမိ မတိုးတက်သေးလို့ ဒီလိုလုပ်နေရပါလား ဆိုတာကိုတော့ သူတို့ နောင် တစ်ချိန်မှာ ကောင်းကောင်းနားလည်လာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်ပေးနိုင်တဲ့ အနုပညာစွမ်းအားနဲ့ လူတွေကို ပေးဆပ်နေချင်သေးတယ်။ မသေခင် အထိပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလကလည်း ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော် ကဗျာတစ်ပုဒ် တင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ' ဖေဖော်ဝါရီ ဆယ့်သုံးဖွား ' ဆိုတဲ့ ကဗျာပါ။
အဲဒီကဗျာကို ပို့စ်တင်တော့ ကျွန်တော့်ကို ဘလော့ဂါ ဆရာဝန် ကိုဟန်ကြည်က သူစာသင်ပေးနေတဲ့ ကလေးတွေကို အဲဒီကဗျာကို ရွတ်ပြတယ်လို့ မှတ်ချက်လာရေးသွားပါတယ်။ အမျိုးသားရေး တာဝန်ကို နိုင်သလောက် ထမ်းခြင်းပါတဲ့။ သူတာဝန်ကျေသလို ကျွန်တော်လည်း ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်က အနုပညာ ဖန်တီးသူပါ။ သူတို့က ခံစားသူပါ။ ဖန်တီးသူရဲ့ အနုပညာပစ္စည်းကို ခံစားတန်ဖိုးထားတတ်ရင် ကျွန်တော်တို့လို အနုပညာ ဖန်တီးသူတွေ ဖန်တီးရကျိုး နပ်ပြီပေါ့။
ကျွန်တော်တွေးပါတယ်။ အပေါ်မှာ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ ကဗျာတွေကတစ်ဆင့် ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ သူတို့ လက်ခံသင့်တဲ့ အရာတွေကို သူတို့ကို ပြောပြမယ့် လူတွေကတစ်ဆင့် ရသွားကြမယ်လို့။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော် ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာကို တစ်ဆင့်ပြန်ပြောပေး သူတွေကို ကျေးဇူးတင်နေ မိတာပါပဲ။
ရင်ထဲမှာ ခံစားထိမိလာတဲ့အခါ အနုပညာဟာ အလိုလို ဖြစ်တည်လာတယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ခံစားမယ့်သူတွေကို မျှဝေပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲကို ထိထိမိမိ ၀င်လာတဲ့ ခံစားမှုတွေရှိတိုင်း အားလုံးကို အနုပညာ အဖြစ် ကျွန်တော် ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တာချည်းပါပဲ။ အဲဒီ အနုပညာတွေကို ခံစားသူတွေ ကလည်း ထိထိမိမိ ခံစားတဲ့အခါ ကျွန်တော် တော်တော်လေး ကျေနပ်မိတာပါပဲ။ ပြီးတော့ သူတို့က တစ်ဆင့် ထပ်ဆင့်မျှဝေတဲ့အခါ ပိုလို့တောင် ကြည်နူးရပါသေးတယ်။
တကယ်တော့ အနုပညာဆိုတာ ခံစားရင်းနဲ့ မျှဝေပေးတဲ့အခါ လူတွေရဲ့ ရင်ထဲကို ထိုးဖောက်ပြီး အဲဒီကနေ တစ်ဆင့် ကောင်းတဲ့ဘက်ကို ပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ရသွားရင် အကောင်းဆုံးပဲ လို့ ကျွန်တော် ခံစားထင်မြင်နေမိကြောင်းပါ ခင်ဗျား။ ။
Posted by ဆူးသစ် at 1:53 PM6comments
" လွတ်မြောက်ခြင်း......ငှက် " ( သို့မဟုတ် ) "ဘယ်သူ...